Ihe niile banyere otú iji iCloud, iCloud nkwado ndabere na mpaghara iCloud Nchekwa
1 Brief Okwu Mmalite
2 Olee otú Jiri iCloud
2.1 Melite iCloud
2.2 Iji iCloud Services
3 Ihe iCloud ndabere
4 Ihe iCloud Nchekwa
Brief Okwu Mmalite maka Olee otú Jiri iCloud, iCloud nkwado ndabere na mpaghara iCloud Nchekwa
iCloud, Apple ulo oru ya dị ka ndị kacha ụzọ jikwaa ọdịnaya gị: òkè faịlụ n'etiti iPhone, iPad, iPod na kọmputa, ndabere mkpa data on iPhone, iPad na iPod, weghachi iOS ngwaọrụ ndabere faịlụ ma chọta ma hichapụ data on furu efu iOS ngwaọrụ remotely. Bụrụ na ị nwere iOS ngwaọrụ, iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod, ị kwesịrị ị na ịmụta otú iji iCloud. Isiokwu a tumadi na-elekwasị anya 3 akụkụ:
Part 1. Olee otú Jiri iCloud:
>> Olee otú iji melite na debanyere iCloud
>> Olee otú iji melite na-eji iCloud ọrụ (Photo Stream, Ndi ana-akpo, Mail, kalenda ......) Part 2. Olee otú Jiri iCloud ndabere: >> Olee otú ndabere data iCloud >> Olee otú iji weghachi iOS ngwaọrụ iCloud ndabere >> Olee otú iji selectively naghachi data si iCloud ndabere Part 3. Olee otú Jiri iCloud Nchekwa >> Olee otú iji ego iCloud nchekwa >> Olee otú iji free elu iCloud nchekwa >> Olee otú iji nweta nkwalite iCloud nchekwa >> Olee downgrade iCloud nchekwa
Si n'elu, ị pụrụ ịhụ na Ọdịdị nke isiokwu a. Iji lee anya na onye ọ bụla akụkụ, biko pịa igodo mmanya na ekpe.
Otú melite na ihe ịrịba ama na iCloud
Ọ bụ free edebanye na iCloud. Gị Apple ID ga-eme. Maka ndị na-adịghị ihe ọ bụla mmasị maka a pụrụ iche iCloud ID, ihe Apple ID nwere ike ịbụ gị iCloud akaụntụ. Ya mere, na nke a, ị na-adịghị mkpa edebanye a akaụntụ ọhụrụ maka iCloud, ma banye na iCloud na gị Apple ID. Ọ bụrụ na ị nwere Apple ID Ma, echegbula, e nwere ọtụtụ accesses ka ịrịba ama elu window maka Apple ID m Aga banyere n'okpuru. Ka na-anya na otú melite iCloud na kọmputa gị na iOS ngwaọrụ mbụ. Nanị mgbe ọma mwube iCloud na kọmputa gị na iPhone, iPod aka, na iPad, i nwere ike iji iCloud n'ụzọ zuru ezu.
* On iPhone, iPod aka, na iPad:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone, iPod aka ma ọ bụ iPad na Wi-Fi ma ọ bụ a anụ netwọk.
Nzọụkwụ 2. pịa Ntọala> Ozuruọnụ> Software Update iji hụ ma e nwere ihe update dị na gị iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na e bụghị, ọ pụtara na software bụ ọhụrụ otu. Ọ bụrụ na e, ị kwesịrị ị imelite gị iOS ka ọhụrụ otu.
Nzọụkwụ 3. pịa Ntọala> iCloud> tinye Apple ID. Ọ bụrụ na ị nwere Apple ID ma, enweta "Get a Free Apple ID" n'otu window na-eso ntọlite ​​nnyemaaka ịmepụta otu Apple ID na adreesị email gị.
Nzọụkwụ 4. Kwado iCloud ọrụ maka ngwa site swiping bọtịnụ ka NA e wezụga onye ọ bụla ngwa: Mail, Ndi ana-akpo, kalenda, Nchetara, Safari, Edeturu, Passbook, Eriri Ngakọ Igodo, Photos, Documents & Data, Chọta My iPhone, wdg
Nzọụkwụ 1. Pịa obere apple na akara ngosi na nnọọ n'elu aka ekpe gị Mac na kọmputa na họrọ Software Update. Ọ bụrụ na e nwere onye na update dị, pịa Melite imelite OS X ka ọhụrụ version. Ọ bụrụ na e bụghị, Ikwu Nzọụkwụ 2.
Nzọụkwụ 2. Pịa obere apple icon ọzọ na-ahọrọ System Mmasị. Pịa iCloud na gị banye Apple ID (adịghị enwetatụbeghị otu? Dị nnọọ emefu a nkeji ole na ole ike otu). Họrọ ọrụ na-amasị gị aka site n'inyocha igbe maka onye ọ bụla ọrụ karị.
(Nhọrọ) Nzọụkwụ 3. Launch iPhoto ma ọ bụ Aperture na gị Mac. Pịa Photo Stream na akara ngosi na ekpe sidebar na-atụgharị ya.
* On Windows PC:
Nzọụkwụ 1. Download iCloud Controal Panel on Windows ma wụnye ya na gị na Windows PC.
Nzọụkwụ 2. Open iCloud Controal Panel na gị banye Apple ID. Ego igbe tupu iCloud ọrụ amasị gị nwee. Pịa Mee rụchaa ntọala.
Olee otú Jiri iCloud Services
N'okpuru ebe a bụ ihe ọmụma zuru ezu banyere otú ntọlite ​​na ojiji, iCloud ọrụ:
Photo Stream Mail / Ndi ana-akpo / kalenda / Notes / Nchetara Automatic Downloads Chọta My iPhone (Ngwaọrụ) Safari Documents & data
Brief Okwu Mmalite: Photo Stream ohere ọrụ ịkọrọ foto albums na ndị mmadụ, ụlọ ahịa foto na iCloud ruo ụbọchị 30, na ohere foto na ihe ọ bụla iCloud-nyeere ngwaọrụ.
On iPhone / iPod / iPad ngwaọrụ: pịa Ntọala> Photos & igwefoto, swipe My Photo Stream na Photo Ịkekọrịta, na Gbanye.
On Mac: Pịa obere apple na akara ngosi na n'elu aka ekpe nke window> System Mmasị> ego Photos> pịa Nhọrọ button> ego My Photo Stream na Photo Ịkekọrịta.
On PC: Open iCloud Control panel na PC gị na> ego Photo Stream. Pịa Nhọrọ, ọhụrụ window ego My Photo Stream na Shared Photo iyi.
Olee otú Jiri:
On iPhone / iPad / iPod: enweta na Photo ngwa> mgbata nnwekọrịta na ala> mgbata Mepụta New Stream, aha ọhụrụ iyi na pịa Ọzọ. Na-esonụ window Iji ebe, pịa obere gburugburu na akara ngosi na + ịgbakwunye kọntaktị gị. Pịa Mepụta rụchaa a ọnọdụ elu.
On Mac: ẹkedori iPhoto ma ọ bụ Aperture. Pịa ihe ma ọ bụ Photos iji họrọ ihe / photos na pịa Share button na ala n'aka nri. Pịa New Photo Stream, tinye kọntaktị na ikwu na na òkè. Pịa Share.
On PC: ozugbo ị arụnyere iCloud Controal Panel na nyeere Photo Stream atụmatụ na kọmputa gị, a ọhụrụ Photo iyi ngalaba ga-apụta mgbe ị na-emeghe Computer na Windows Explorer. Emeghe ya na pịa New Photo Stream bọtịnụ. Aha foto iyi ma tinye ndị ọzọ iCloud ọrụ na-Iji igbe ịkọrọ.
Mail / Ndi ana-akpo / kalenda / Notes / Nchetara:
Brief Okwu Mmalite: iCloud-enye gị ohere ịkọrọ gị kọntaktị, mail, kalenda, ndetu na ncheta n'etiti iPhone, iPad, iPod, na kọmputa na ozugbo.
On iPhone / iPad / iPod: pịa Ntọala> iCloud> Swipe niile bọtịnụ maka Mail, Ndi ana-akpo, kalenda, Edeturu, na ihe ncheta na Gbanye.
On Mac: pịa apple akara ngosi na n'elu aka ekpe nke window on Mac> System Mmasị> iCloud> ego Mail, Ndi ana-akpo, kalenda, Edeturu, na ihe ncheta karị.
On PC: Open iCloud Control Panel> ego igbe tupu Mail, Ndi ana-akpo, kalenda, Edeturu, na ihe ncheta karị
Olee otú Jiri: Mgbe mwube, mgbe ọ bụla ị na-update maka Mail, Ndi ana-akpo, kalenda, Edeturu, ma ọ bụ Nchetara, na melite ga-egosi na gị iPhone, iPad, iPod na kọmputa.
Brief Okwu Mmalite: Automatic Downloads na iCloud ga tinye ihe ọ bụla ihe ị zụtaara gị iPhone, iPad, iPod na iTunes na kọmputa n'ebe ọ bụla ị na-azụ ihe.
On iPhone / iPad / iPod: pịa Ntọala> iTunes & App Store, pịgharịa gaa na ala na swipe bọtịnụ maka Update Gbanye.
On Mac: igba egbe iTunes> click Mmasị> pịa Store. Ego Music, Akwụkwọ na égwu na Automatic Downloads ebe.
On PC: ẹkedori iTunes> pịa Dezie> Mmasị> pịa Store. Ego Music, égwu, Akwụkwọ, et. na Automatic Downloads ebe.
Olee otú Jiri: Mgbe enyere Automatic Downloads na gị iPhone, iPod, iPad na iTunes na kọmputa, mgbe ọ bụla a download etịbe, ọ ga-ebudatara niile nke gị na ngwaọrụ na kọmputa na-akpaghị aka.
Chọta My iPhone (Ngwaọrụ):
Brief Okwu Mmalite: Chọta My iPhone (iPad ma ọ bụ Mac) na-eme ka ọ dị mfe maka gị aka ịchọta ngwaọrụ gị mgbe ị kwụsịrị ya (asị na-ekwu ya, ma ọ bụ eziokwu mgbe niile ka anyị ida ihe). Ọbụna mgbe ị na ike inwe ha azụ, i nwere ike iji Chọta My iPhone ihichapu niile data remotely, na-egbochi ndị ọzọ peeping na gị onwe onye data.
On iPhone / iPad / iPod: pịa Ntọala> iCloud> Toggle Chọta My iPhone Gbanye.
On Mac: pịa apple na akara ngosi na Mac> System Mmasị> họrọ checkbox Chọta m Mac
Olee otú Jiri: Mgbe ọ bụla ị chọrọ soro gị iOS ngwaọrụ ma ọ bụ Mac, na-emeghe iCloud webpage ọ bụla na kọmputa na ihe nchọgharị weebụ> abanye na iCloud na gị Apple ID> Pịa Chọta My iPhone> Pịa Devices nhọrọ ma họrọ ngwaọrụ gị si dobe -down ndepụta. Ọzọ, ọzọ nhọrọ n'ihi na-ese ngwaọrụ gị na-egwu a ụda, wetere Lost mode na remotely ikpochapụ ngwaọrụ ga-apụta. Họrọ nhọrọ nke ahụ dị mma maka gị.
Brief Okwu Mmalite: Mgbe mwube Safari, ị nwere ike ele ndị niile na webpages ozugbo ị meghere on ngwaọrụ gị ọ bụla.
On iPhone / iPad / iPod: pịa Ntọala> iCloud> toggle Safari Gbanye.
On Mac: pịa apple na akara ngosi na Mac> System Mmasị> họrọ checkbox Safari
On PC: emeghe iCloud Controal Panel> ego checkbox nke ibe edokọbara
Olee otú Jiri: Mgbe mwube, Safari ga syncs ịgụ ndepụta ihe na ibe edokọbara gị kere ọ bụla na ngwaọrụ niile ngwaọrụ. Ka ume Safari ibe edokọbara on iOS ngwaọrụ, ẹkedori Safari> pịa akwụkwọ akara ngosi na bọtịnụ. On Mac, ẹkedori Safari> pịa akwụkwọ na akara ngosi na nnọọ n'elu aka ekpe.
Brief Okwu Mmalite: On iCloud, gị akwụkwọ, dị ka Pages, Ọnụ Ọgụgụ, na pụtara ìhè na-akọrọ site na Documents & Data. Ọ na-ike na iWork na Microsoft Office oke ime ụlọ.
On iPhone / iPad / iPod: pịa Ntọala> iCloud> toggle Documents & Data Gbanye.
On Mac: pịa apple na akara ngosi na Mac> System Mmasị> họrọ checkbox Documents & Data.
Olee otú Jiri: Open iCloud ibe weebụ na ihe nchọgharị weebụ na kọmputa gị> abanye na na gị Apple ID> ahọrọ faịlụ ụdị ị na-aga bulite (Pages: okwu, RTF, Text akwụkwọ, Ọnụ Ọgụgụ: Excel spreadsheets, pụtara ìhè: n'ihu faịlụ). Dọrọ na dobe faịlụ site na kọmputa gị Obodo draịvụ ike ka webpage.
Olee otú ndabere data iCloud na otú iji iCloud ndabere
Nke a na peeji na-ekpuchi ndị na-esonụ akụkụ:
Olee otú ndabere data iCloud Olee otú iji weghachi iOS si iCloud ndabere otú selectively Naghachi Data si iCloud ndabere
Olee otú ndabere data iCloud
Na-ewere data nche mbipụta echiche, ọ bụrụ na ị nyeere iCloud ọrụ, ị ga ndabere gị iOS ngwaọrụ iCloud mgbe nile. Mgbe ọ bụla ị na-ahụ ụfọdụ dị mkpa data na gị iCloud na-efu, ị nwere ike nweta ya azụ site na-eweghachiri ngwaọrụ gị si iCloud ma ọ bụ selectively bulie data si iCloud ndabere. N'okpuru ebe a bụ mfe nzọụkwụ nkwado ndabere na mpaghara iOS ka iCloud:
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod na Wi-Fi.
Nzọụkwụ 2. pịa Ntọala> iCloud> Nchekwa na nkwado ndabere na gị iOS ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 3. Swipe iCloud ndabere na Gbanye. Pịa OK ka infor "Your iPhone agakwaghị ndabere gị na kọmputa na-akpaghị aka mgbe ị na-mmekọrịta na iTunes". Enweta ndabere Ugbu a.
Olee otú iji weghachi iOS si iCloud ndabere
Mgbe ọ bụla ị mkpa ụfọdụ ochie data si iCloud ndabere gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod, ị pụrụ ịgbaso nzọụkwụ n'okpuru iweghachi gị iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod si iCloud ndabere.
Nzọụkwụ 1. pịa Ntọala> Ozuruọnụ> nrụpụta> Ihichapu ọdịnaya niile na na ntọala gị na iOS ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 2. Họrọ Weghachi si iCloud ndabere, gị banye Apple ID na-ahọrọ ihe iCloud ndabere ka weghachi.
Olee otú selectively Naghachi Data si iCloud ndabere
E wezụga na-gị efu data azụ site na-eweghachiri gị iOS ngwaọrụ, ị nwekwara ike selectively naghachi data si iCloud ndabere. Otú a bụ karịsịa bara uru mgbe ị na-ekpebi okporo mmiri iOS ngwaọrụ Android ntị (mbadamba) ma ọ bụ furu efu gị iOS ngwaọrụ mgbe chọrọ bulie data gị iCloud ndabere.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery maka Windows) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac) na kọmputa gị. Pịa "Naghachi Data si iCloud ndabere File".
Nzọụkwụ 2. Sign na iCloud na gị Apple ID na ibudata iCloud ndabere faịlụ.
Nzọụkwụ 3. Click iṅomi ka a usoro iṅomi gị iCloud ndabere faịlụ, ụdị nile data nkenụụdị. Na, na, ị nwere ike họrọ chọrọ data, dị ka kọntaktị, foto, videos, ndetu, kalenda, wdg na pịa Naghachi na-azọpụta ha gị na kọmputa.
Olee otú Lelee iCloud Nchekwa Olee onwe elu iCloud Nchekwa otú nweta nkwalite iCloud Nchekwa otú Downgrade iCloud Nchekwa
* Olee otú iji Lelee iCloud Nchekwa:
Chọrọ ịhụ otú ihe gị iCloud Nchekwa na-ekpe? Ego iCloud nchekwa:
On iPhone / iPod / iPad: pịa Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere
On Mac: pịa apple na akara ngosi na gị Mac window> System Mmasị> iCloud> Jikwaa
Windows 8.1: na-aga Malite window na pịa ala akụ. Pịa iCloud ngwa na pịa Jikwaa.
Windows 8: na-aga Malite window na pịa iCloud aha. Pịa Jikwaa.
Windows7: pịa imeghe mmalite menu> All Mmemme> iCloud, wee pịa Jikwaa.
* Olee onwe elu iCloud Nchekwa:
Onye ọ bụla Apple ID n'emere ị na 5GB ohere maka iCloud for free. Otú ọ dị, ị ga-ahụ na mgbe akwado gị iOS ka iCloud maka a ugboro ole na ole, na nchekwa bụ oke obere na-echekwa ihe ọ bụla. Na nke a, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ihe ọ bụla atụmatụ maka upgrading iCloud nchekwa, nanị ụzọ ka onwe iCloud nchekwa bụ ka ihichapụ ochie iCloud ndabere faịlụ:
Nzọụkwụ 1. pịa Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere> ahọrọ Jikwaa Nchekwa na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod.
Nzọụkwụ 2. Họrọ ochie ndabere ị chọrọ ka ihichapụ na enweta na-acha uhie uhie Hichapụ ndabere nhọrọ. Na mgbe ahụ gosi nhichapụ site na ịme ọpịpị Gbanyụọ & Hichapụ. (Cheta na: dị na-echeta ghara ihichapụ kasị nso-nso ndabere.)
* Olee otú iji nweta nkwalite iCloud Nchekwa:
Ọ bụrụ na ị na-ahụ iCloud nchekwa bụ oke obere na-eji, e wezụga ndị n'elu kwuru banyere ka ihichapụ iCloud ndabere faịlụ, nwekwara ike nweta nkwalite iCloud Nchekwa site akwụ ụgwọ maka ya. Ị nwere ike nweta nkwalite iCloud nchekwa na gị iPhone, iPad, iPod, na kọmputa.
On iPhone / iPod / iPad: pịa Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere> Zụrụ More Nchekwa. Họrọ mmegolite, enweta Buy na-abanye na gị Apple ID paswọọdụ.
On Mac: pịa apple na akara ngosi na nnọọ n'elu aka ekpe nke Mac window> System Mmasị> ahọrọ iCloud; Pịa Jikwaa na ala> pịa ịgbanwe Nchekwa Plan> ahọrọ mmegolite na pịa Ọzọ. Tinye Apple ID paswọọdụ.
On PC: emeghe iCloud Control Panel> Pịa Jikwaa> pịa ịgbanwe Nchekwa Plan> ahọrọ nweta nkwalite wee pịa Ọzọ. Tinye Apple ID na pịa Buy.
N'okpuru ebe a bụ chaatị maka iCloud nweta nkwalite. Ị nwere ike ịlele price.
* Olee downgrade iCloud Nchekwa:
On iPhone / iPod / iPad: pịa Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere. Enweta ịgbanwe Nchekwa Plan> Downgrade Nhọrọ. Tinye Apple ID ma họrọ a dị iche iche atụmatụ iji gị iCloud nchekwa.
On Mac: pịa apple na akara ngosi na gị Mac> System Mmasị> iCloud. Pịa Jikwaa> ịgbanwe Nchekwa Plan> Downgrade Nhọrọ. Tinye Apple ID na pịa Jikwaa. Họrọ a dị iche iche atụmatụ maka iCloud nchekwa na pịa mere.
On PC: emeghe iCloud Controal panel> Jikwaa> ịgbanwe Nchekwa Plan> Downgrade Nhọrọ. Tinye Apple ID na pịa Jikwaa. Họrọ a ọhụrụ atụmatụ maka gị iCloud Nchekwa na pịa Emela ya.
Ụzọ abụọ mmekọrịta Outlook Na iCloud Mfe
> Resource> iCloud> Atụmatụ Center: Olee otú Jiri iCloud, iCloud nkwado ndabere na mpaghara iCloud Nchekwa